स्वास्थ्य र संगीतको नाता – MEDIA DARPAN
स्वास्थ्य र संगीतको नाता
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १९:४९
तपाईं किन गीत सुन्न रुचाउनुहुन्छ ? वा गीत सुनिरहँदा तपाईंको मुड कस्तो हुन्छ ? मधुर संगीतमा मग्न भइरहँदा तपाईं कति आनन्दित महसुष गर्नुहुन्छ ?
सायद तपाईंले अनुभूत गर्नुभएकै कुरा हुन् यी । अर्थात संगीत सुन्दा तपाईं कसरी आनन्दित, उद्वेलित हुनुहुन्छ ? त्यो अनुभव गरिसक्नुभएको छ । संगीतको गहिराई र शक्तिबारे त हामीले कथाहरु सुन्दै आएकै छौं । संगीतलाई स्वास्थ्य खासगरी मानसिक स्वास्थ्यसँग पनि जोड्ने गरिन्छ । कतिपय उपचारमा संगीतको प्रयोग गरिन्छ ।
संगीतबाट हाम्रो शरीर पनि लाभान्वित हुने गर्छ । त्यसैले त होला, हावा, पानी, नदी, समुन्द्र, पंक्षी, फूल, रुख र मान्छेभित्र पनि प्रकृतिले संगीत भरिदिएको छ । आयुर्वेदले देह र मस्तिष्कलाई सन्तुलित गर्नका लागि संगीतलाई थेरापीको रुपमा मान्यता दिएको छ । संगीत-चिकित्साले शरीरलाई बदल्नका लागि एक परिस्कृति तरिका उपलब्ध गराएको छ । संगीत ‘शान्तिदायक’ वा ‘उत्तेजक’ भन्दा केही बढी हो ।
संगीतको धुन, त्यसको लयले हाम्रो हृदयलाई प्रभावित बनाउँछ । जस्तो कि रोमान्टिक वा प्रेरणादायी संगीत सुनेर हाम्रो मनभित्र बेग्लै तरंग पैदा हुन्छ । त्यसैगरी जब हामी भावुक, उदास गीत सुन्छौं, हाम्रो मन पनि उदास रहन्छ । कतिपय संगीत हामी सुन्न सक्दैनौ । कतिपय संगीतमा भने घण्टौं घण्टा रमाउन सक्छौं । यसरी संगीतले हाम्रो मुडमा प्रभाव पार्छ ।
जब हामीलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ, त्यस्तै किसिमको संगीत सुनेर हामी विन्दास रमाउँछौं । कहिले काहीँ हाम्रो मन यसै दुःखी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी भावुक किसिमको संगीत सुन्छौं । संगीतले कहिले हामीलाई रोमान्टिक बनाउँछ, कहिले उत्तेजित । विद्रोहीहरुले आफ्नो आवाजलाई अरु शक्तिशाली बनाउन संगीतकै साहारा लिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । कतिपय गीत यस्ता हुन्छन्, जसलाई सुन्दा तपाईं/हाम्रो मुटुको चाल बढ्छ । यसरी संगीतले हामीभित्र उथलपुथल ल्याउँछ ।
त्यसैले संगीतलाई हामी आफ्नो जीवनको लयसँग जोड्न सक्छौं । संगीतकै माध्यामबाट हामी आफुलाई खुसी र उत्साहित बनाइरहन सक्छौं । संगीत सुनिरहँदा हाम्रो ध्यान अन्यत्र भड्किदैन ।
कतिबेला सुन्ने संगीत ?
संगीत कतिबेला सुन्ने त ? यसको आफ्नो निश्चित समय छ । वैदिक संगीत पाठमा निर्देशन दिइएको छ कि, बिहान, मध्यन्ह र साँझ कुन कुन किसिमको राग उपयुक्त हुन्छ । मध्यन्हपछि शान्त किसिमको संगीत सुन्न सुझाइएको छ । त्यसबेला हामी कामको चापमा वा थकानमा हुन्छौं । तनावमा घेरिएका हुन्छौं । अतः मनलाई शान्त तुल्याउनका लागि सोही किसिमको संगीत सुन्नुपर्छ ।
समय अनुसार संगीत
यदि तपाईं आफ्नो रक्तचाप कम गर्न चाहनुहुन्छ भने हल्का, मन्द शास्त्रीय संगीत सुन्न सक्नुहुनेछ । यसैगरी तपाईंमा अनिन्द्राको समस्या छ र निदाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने पनि यस्तै किसिमको संगीत सुन्न सक्नुहुनेछ ।
संगीतलाई आफ्नो दिनचर्यामा सामेल गरेर केही किसिमका समस्याबाट पार पाउन सक्नुहुनेछ । बिहानको समयमा शान्त जगाउने, खाना खाइसकेपछि सक्रिय रहने र राती सुत्ने समयमा आनन्दित बनाउने किसिमको संगीत सुन्नुपर्छ ।
मानौ तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ वा पारिवारिक झगडा भइरकेको छ भने पनि तपाईं संगीत सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस् । जब तपाईं रोमान्टिक संगीत सुन्न थाल्नुहुनेछ, तनाव आफै घट्नेछ । झगडालु वा उत्तेजित मन अर्कैतर्फ मोडिनेछ ।
संगीत सुन्ने सही तरिका
संगीत सुन्दा त्यसकै धुनमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ । आँखा बन्द गरेर मन शान्त बनाएर संगीत सुन्दा अरु आनन्दित अनुभव गर्न सकिन्छ ।
विद्या बालनको रहस्यमहि विगत
कलाकार सुभद्रा अधिकारीको आज निधन